मैले तीनपल्ट सेना बचाएको छु : डा. रामवरण यादव - रमाइलो नेपाल डट कम| Ramailoo Nepal
You are at:Home»अन्तरवार्ता»मैले तीनपल्ट सेना बचाएको छु : डा. रामवरण यादव
By Ramailoo Nepal on	 August 24, 2017 अन्तरवार्ता
तर तपार्इंले मान्नुभएन…
(एकछिन रोकिएर) … कांग्रेसबाट कहीँ न कहीँ चाहना आएको थियो । माधवजीले थाहा पाउनुभएछ । मलाई यसबारे सोध्नुभयो । मैले भने, ‘त्यहाँबाट यो कुरा आयो भने म मान्दिनँ ।’ एमालेवालाहरूलाई ममाथि पूरै विश्वास थियो, राष्ट्राध्यक्ष यो कुरामा अडिग छन् ।
मधेश आन्दोलन नभएको भए मधेशी सांसदको प्रतिनिधित्व बढ्दैनथ्यो । तपार्इं राष्ट्रपति हुने सम्भावना सायद कम हुने थियो…
कांग्रेसले किन तपार्इंप्रति अपनत्वभाव देखाएन ? आखिर तपाईं कांग्रेसकै ब्यानरबाट आउनुभएको थियो…
नरहरि त विद्वान नेता हुनुहुन्छ…